Uploaded by mgmgpwar
Typed by Loverboy2011
“ စန်းမ….ရှေ့အပတ်မှာ တို့ဒဂုံက ခြံထဲသွားလည်မလို့…လိုက်ဦးမလား….”
“ ငါ့ဘဲနဲ့ လျှောက်လည်မလို့ ချိန်းထားတယ်ကွ….မင်းတို့ပဲသွားပါ ခင်သူရာ….”
“ ဟဲ့ ငါလည်း ငါ့ဘဲနဲ့သွားမှာ….နင်လည်း နင့်ဘဲခေါ်ပြီး လိုက်ခဲ့ပေါ့…လျှောက်လည်တာ
ခြေညောင်းတယ်….လူမြင်တယ်ဟဲ့ စန်းမ ရဲ့….”
“ အေး…ကောင်းသားပဲ…ငါ့ဘဲကိုပြောပြီး အတူသွားကြတာပေါ့….ခြံထဲမှာက ဘယ်သူရှိလဲ…”
“ ဘယ်သူမှမရှိဘူးဟဲ့…အဲဒါကြောင့် ပြောတာ…ဟိုမှာက လွတ်လပ်တယ်…ဟင်း ဟင်း…”
ခင်သူကပြောရင်း သူမဖာသာ သဘောကျသလို ရယ်လိုက်တော့ စန်းမမ မျက်နှာလေး နီရဲသွားသည်။
စန်းမမနှင့် ခင်ခင်သူတို့မှာ တက္ကသလ
ိုကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သည်။ ယခု အလုပ်ဝင်ကြတော့လည်း
ကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲတွင် ဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ယောက်စလုံး အသက် (၂၀)ပတ်ဝန်းကျင်တွေဖြစ်ကြသည်။ စန်းမမ၏
ဘဲက မျိုးအောင်ဆိုသူဖြစ်ပြီး အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်နေသည်။ စန်းမမနှင့်
သက်တူရွယ်တူဖြစ်ပြီး ကျောင်းမပြီးမှီကတည်းက တွဲနေကြတာဖြစ်သည်။ ခင်ခင်သူ၏ ဘဲကတော့
စိုးလင်းဆိုသူဖြစ်သည်။ စိုးလင်းက ခင်ခင်သူထက် အသက်(၂)နှစ် (၃)နှစ်ခန့်ကြီးသည်။ ခင်ခင်သူတို့နှင့်
မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မှာနေသူဖြစ်ပြီး ခင်ခင်သူ ဆယ်တန်းရောက်ကတည်းက ကြိုက်နေကြတာဖြစ်သည်။
စိုးလင်းမှာ (၁၀)တန်းမအောင်ခဲ့သော်လည်း သူတို့အိမ်မှာက တက္ကစီ(၄)စီးရှိ လေတော့
မြောက်ဒဂုံက ခြံက ခင်ခင်သူ၏ ဖခင် အငြိမ်းစားမယူမီကတည်းက ရထားသောခြံဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်
ကပ်လျက်ရှိသည့်ခြံဝိုင်းကိုပါ ဝယ်လိုက်သဖြင့် သူမတို့၏ခြံမှာ ကျယ်သွားသည်။ ခြံကျယ်ထဲတွင်
သုံးပင်နှစ်ခန်းပျဉ်ထောင်အိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်ထားသော်လည်း ခင်ခင်သူတို့မှာ ကျောက်မြောင်းထဲတွင်
တိုက်ခန်းရှိပြီးသားဖြစ်၍ သွားမနေဖြစ်ဘဲ ပိတ်ထားခဲ့ရတာဖြစ်သည်။ တစ်လတစ်ကြိမ် နှစ်လတစ်
ကြိမ်လောက် အလုပ်သမားတစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စငှား၍ ခြံရှင်းထားသဖြင့် ခင်ခင်သူ၏ခြံလေးမှာ
အမြဲတမ်း သပ်ရပ်သန့်ရှင်းနေလေ သည်။
ဒီအပတ် ရုံးပိတ်ရက်တွင် ခင်ခင်သူတို့ အတွဲက ဒဂုံကခြံထဲသို့လာခဲ့ရာ စန်းမမတို့အတွဲပါ
အတူလိုက်ပါလာလေသည်။ ခင်ခင်သူ၏ ဘဲ စိုးလင်း၏ကားနှင့်ဆိုတော့ အဆင်ပြေသွားသည်။
“ ဟယ်....ခြံလေးက သာယာလိုက်တာ…”
ခြံရှေ့သို့ ကားရပ်လိုက်သည်နှင့် စန်းမမက သူ့ဘဲ မျိုးအောင်ဖက်သို့လှည့်၍ ပြောသည်။
“ အထဲမှာ ဒီ့ထက်သာယာသေးတယ်….အိမ်ပေါ်တက်ပြီး စားစရာတွေစားပြီးမှ ဆင်းကြည့်ပေါ့….”
ခင်ခင်သူက ဦးဆောင်၍ အိမ်တံခါးကိုဖွင့်ပေးလိုက်တော့ သူတို့အားလုံး အိမ်ပေါ်သို့ တက်လာခဲ့ကြသည်။ အိမ်ရှေ့ကြမ်းပြင်တွင် ခင်းထားသော ဖယောင်းပုဆိုးပေါ်သို့ ဝယ်လာသော စားစရာများချရင်း ခင်ခင်သူတို့ အတွဲက ထိုင်ချလိုက်သည်။ “ ငါတို့ အထဲဝင်ကြည့်ဦးမယ်ဟာ…” စန်းမမနှင့် မျိုးအောင်တို့ အိမ်ထဲဖက်သို့ ဝင်သွားသည်။ အိမ်လေးက အပြင်မှကြည့်ရင်သာ သေးသေးလေးထင်ရသည်။ အထဲမှာက အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းနှင့် မီးဖိုက နောက်တွင်သပ်သပ်ရှိကာ အတော်လေးကျယ်သည်။ မိန်းကလေးပီပီ စပ်စပ်စုစုဖြင့် စန်းမမမှာ အိမ်သာနှင် ရေချိုးခန်းတို့ကိုလည်း ဖွင့်၍ကြည့်လိုက်သေးသည်။ မီးဖိုချောင်ထဲမှ ပြန်ထွက်လာတော့ အိပ်ခန်းတစ်ခန်းထဲသို့ ဝင်၍ကြည့်သည်။ “ အိပ်ခန်းတွေက ကျယ်တယ်နော် ” စန်းမမ က မျိုးအောင်ကို လှမ်း၍ပြောသည်။ မျိုးအောင်က စန်းမမပြောသော အိပ်ခန်းထက် စန်းမမကိုပို၍ စိတ်ဝင်စားနေပုံရသည်။ စန်းမမ လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါ သူမ၏နောက်ပိုင်းကိုကြည့်နေသော မျိုးအောင်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ “ ဟိတ်….အဟိ ” ခင်ခင်သူက စိုးလင်းကို ခပ်တိုးတိုးလေးပြန်၍ ပြောလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ….ဒီမှာပြောနေတယ်လေ ” “ မကြားလိုက်ဘူး….ဟိုနှစ်ယောက် အထဲဝင်သွားပြီး အသံတိတ်သွားတယ်…. “ အဟမ်း….” စိုးလင်းက ပြောလိုက်တော့မှ ခင်ခင်သူ သတိထားမိပြီး နားစွင့်လိုက်သည်။ “ ဟုတ်တယ်နော်….” “ ပြွတ် ” စန်းမမ သူမ၏နှုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲ၍ဖြုတ်လိုက်သည်။ “ ဟိုမှာ ခေါ်နေပြီ သွားရအောင် ” မျိုးအောင်က သိပ်ပြီးမကျေနပ်ချင်။ သူ့ဘေးမှ ဖြတ်၍ထွက်သွားသော စန်းမမ၏ တင်သားတစ်ဖက်ကို .ဟိုနှစ်ယောက် ဒီမှာ စားစရာရှိတာ လာစားကြဦး…...” “ မမကလည်းကွာ…တစ်ပတ်လုံးလုံး မတွေ့ရတာတော့ မပြောဘူး…” မျိုးအောင် ဖက်ထားလျက်မှပင် စန်းမမမှာ သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို မျိုးအောင်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်အောင် လှည့်လိုက်သည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်သွားသည်နှင့် စန်းမမက သူမ၏မျက်နှာလေးကို မော့၍ပေးသည်။ မျိုးအောင်က စန်းမမ၏ နှုတ်ခမ်းလုံးလေးတွေကို တစ်ချက်ငုံ့ကြည့်လိုက်ပြီး စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ စန်းမမ၏ ကိုယ်လုံးလေးမှာ ခြေ ဖျားလေးထောက်၍ ကြွတက်သွားသည်။ “ ဟေ့….ကိုယ်သတိာက တစ်ခုပဲရှိတယ် ” မျိုးအောင် စန်းမမ ကို နောက်ကနေသိမ်းကြုံး၍ဖက်လိုက်သည်။ အသည်းအသန်ဖြစ်နေသော မျိုးအောင်၏ ပစ္စည်းကြီးက သူမ၏တင်သားတွေကိုလာပြီး ထောက်လိုက်တော့ စန်းမမ အတော်လေး နေရထိုင်ရခက်သွားသည်။ မျိုးအောင်က စန်းမမ၏ လည်တိုင်လေးနှင့် ပုခုံးလေးများကို ငုံ့၍နမ်းသည်။ “ မင်းကလည်းကွာ…တစ်နေ့လုံး အချိန်တွေရှိသေးတာကို….
” စန်းမမက ပြောပြီး ကိတ်မုန့်ဘူးလေးကို ယူ၍အထဲမှ ကိတ်မုန့်တစ်ခုကို ယူ၍စားသည်။ “ စားလေ…” “ ဟင့်အင်း…” မျိုးအောင်က ခေါင်းခါ၍ပြောရင်း စန်းမမ၏ပေါင်တန်လေးကို ပွတ်မြဲပွတ်ကာ စန်းမမ၏ ကိုယ်လုံးအား စားတော့ဝါးတော့မတတ် ကြည့်နေသည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ ဒီလိုကြည့်တာကို ခံရသော မိန်းကလေးမှာလည်း စိတ်တွေလှုပ်ရှားကာ သွေးသားများထကြွတတ်လေသည်။ .ခြံရှေ့နဲ့လည်း နီးတယ်…ဟိုအတွင်းဖက်ကိုသွားကြမယ်….အိမ်နဲ့နီးတယ်….ဆာနေပြီကွ….လှမ်း၍ကိုင်လိုက်သည်။ အိမ်ရှေ့သို့ပြန်ရောက်လာသော စန်းမမနှင့် မျိုးအောင်တို့နှစ်ယောက်စလုံး မျက်နှာတွေနီမြန်းနေကြသည်။ “ ကဲ….ဒီမှာ အစားအသောက်တွေ စားဦးမယ်လေ….” ခြံအတွင်းဖက်သို့ အနည်းငယ်လျှောက်မိကြသောအခါ ရွက်လှပင်တွေဝိုင်းပတ်၍ စိုက်ထားသော ခြောက်ပေ ခုနစ်ပေပတ်လည် လောက်ရှိသည့် မြေကွက်လပ်လေးတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုနေရာသို့ရောက်လျှင် စန်းမမက ရပ်၍ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ လှည့်ပတ် ကြည့်၍ အကဲခတ်လိုက်ပြန်သည်။ “ ဒီနေရာမှာပဲ ထိုင်ကြမယ် ” မျိုးအောင်က ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ပြီး လက်ထဲမှ ဖျာလေးကို မြေပြင်တွင် ခင်းလိုက်သည်။ အနားတွင်ရှိသော သရက်ပင်နှစ်ပင်ကလည်း ကိုင်းခြင်းယှက်နေသဖြင့် ထိုမြေကွက်လပ်ကို နေရောင်မထိုးဘဲ အရိပ်ရနေသည်။ ဖျာခင်းပြီးသွားသည်နှင့် စန်းမမက သူမလက်ထဲမှ အအေးဘူးနှင့် ကိတ်မုန့်များကို ဖျာပေါ်သို့ချလိုက်ပြီး သူမကပါ ဖျာပေါ်သို့ ထိုင်ချလိုက်သည်။ မျိုးအောင်ကလည်း သူမ၏ဘေးတွင် ဝင်၍ ထိုင်ချလိုက်သည်။ စန်းမမမှာ ဖျာပေါ်သို့ ယောက်ျားများထိုင်သလို တင်ပလ္လင်ခွေ၍ ထိုင်ချလိုက်ရာ ဝတ်ထားသော ဒူးဆစ်လောက်သာရှိ သည့် စကပ်လေးမှာ အပေါ်သို့တွန့်တက်သွားပြီး ပေါင်သားအဖျားလေးတွေက လက်တစ်ဝါးခန့် ပေါ်၍သွားသည်။ နုညက်ဖြူဝင်းသော ပေါင်သားလေးများကို ငုံ့ကြည့်ရင်း မျိုးအောင်၏ လက်က ပေါင်သားလေးများပေါ်သို့ ရောက်သွားသည်။ ခပ်ဖွဖွ လေး တစ်ချက်ဆုပ်လိုက်ပြီးမှ စကပ်အတွင်းသို့ပါ လက်ဖဝါးဖြင့် လျှောတိုက်၍ပွတ်လိုက်သည်။ “ မင်းကလည်းကွာ….ဒီမှာစားကြဦး ” ခင်ခင်သူက အအေးဘူးနှင့် ကိတ်မုန့်များကို လှမ်း၍ပေးသည်။ “ တို့တော့ ခြံထဲဆင်းပြီး စားကြမယ် ” စန်းမမက ရှက်နေဟန်နှင့်ပြောသည်။ “ ဟိုမှာ ဖျာလေးတစ်ချပ်ရှိတယ် ယူသွားကြ ” ခင်ခင်သူက အိမ်ရှေ့ခန်းထောင့်တွင် လိပ်၍ထောင်ထားသော ဖျာလိပ်လေးကို လှမ်း၍ပြသည်။ မျိုးအောင်က ဖျာလိပ်လေးကို သွား ယူ၍ အိမ်ပေါ်မှဆင်းကာ စန်းမမနှင့်အတူ ခြံထဲသို့ ဆင်းလာခဲ့ကြလေသည်။ “ မမ…ဒီနေရာမှာ ထိုင်ကြရအောင်လား ” စန်းမမ ပတ်ဝန်းကျင်သို့ တစ်ချက်ဝေ့ကြည့်လိုက်သည်။ “ ဟင့်အင်းကွာ….
ဟေ့ နေဦးလေ ” စန်းမမက ပြောသဖြင့် မျိုးအောင်က သူမကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ခုနက မျိုးအောင်က ဗြုံးကနဲဖက်လိုက်တော့ စန်းမမက ပါးစပ်ထဲ ထည့်လိုက်သော ကိတ်မုန့်မှာ အံလွှဲ၍သွားကာ စန်းမမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးများတွင် ကိတ်မုန့်မှ ကရင်(မ်)တွေက အတုံးအတစ်နှင့်ကပ်၍ နေသည်။ ဒါကို စန်းမမက တစ်ရှုးနှင့် သုတ်ရန်လုပ်သည်။ “ နေဦး မမ ” မျိုးအောင်က ကောက်ခါငင်ကာပြောလိုက်ပြီး စန်းမမ၏ လည်ပင်းလေးကို သိုင်း၍ဖက်ကာ သူမ၏နှုတ်ခမ်းအစုံတွင် ပေကျံနေသော ကရင်(မ်)တွေကို လျှာဖြင့်ယက်၍ပေးသည်။ စန်းမမက မျက်လုံးလေးမှိတ်၊ မျက်နှာလေးမော့ကာ အရသာရှိရှိ ငြိမ်၍ခံသည်။ နှုတ်ခမ်းပေါ် က ကိတ်မုန့်ကရင် (မ်)တွေ ကုန်သွားပြန်တော့ သူမ၏အပေါ်နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြွတ်ကနဲနေအောင် ဆွဲ၍စုပ်နမ်းလိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်းလေးကို မြဲအောင်စုပ်ထားပြီး လျှာဖျားလေးနှင့် ပွတ်၍ပေးသည်။ စန်းမမ၏ ခါးလေးစန့်၍တက်လာပြီး လက်နှစ်ဖက်က မျိုးအောင်၏ နောက်ကျော ကို သိုင်း၍ဖက်လိုက်သည်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပင် သူမ၏နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားတွင် ရောက်နေသော မျိုးအောင်၏ အောက်နှုတ်ခမ်းကို တပြွတ်ပြွတ်နှင့်ပြန်၍စုပ်ပေးသည်။ မျိုးအောင်မှာ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် စန်းမမကို သိုင်းဖက်၍ သူမ၏နှုတ်ခမ်းများကို စုပ်နေရင်း သူ့ထုံးစံအတိုင်း လက်တစ်ဖက်က စန်းမမ၏ ရင်သားတစ်ဖက်ကို အုပ်ကိုင်၍ဆုပ်နယ်ပေးသည်။ အပေါ်မှအင်္ကျီနှင့် အတွင်းမှ ဘရာစီယာတို့ခံနေ၍ သိပ်ပြီးမထိလှသဖြင့် မျိုး အောင် သာမန်ထက်အားပိုစိုက်ကာ ဆုပ်နယ်ပေးသည်။ ဖြူဖွေးသော အသားအရေရှိသည့် စန်းမမ၏ တကိုယ်လုံးနီရဲ၍ တက်လာသည်။ တဖြေးဖြေးလည်း မော၍လာသည်။ စန်းမမက နှုတ်ခမ်းခြင်း ဖြေးဖြေးချင်းမျှင်း၍ ခွာလိုက်သည်။ “ ဟိုမှာ စားဦး….ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ မသိဘူး ” စန်းမမကလည်း မျိုးအောင်၏လက်တွေကို တွန်းဖယ်၍ မျက်စောင်းထိုးကာပြောလိုက်ပြီး မတ်တပ်ထရပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သေသေချာချာကြည့်၍ အကဲခတ်ကာ ပြန်၍ထိုင်ချလိုက်သည်။ “ ကဲ…အဝတ်တွေချွတ်ဦး….တော်ကြာ မောနေမယ် ” စန်းမမ မောသံလေးနှင့်ပြောရင်း အအေးတစ်ဘူးကို ဖောက်၍သောက်သည်။ မျိုးအောင်ကလည်း အအေးတစ်ဘူးကို ဖောက် သောက်သည်။ သူတို့နေရာလေးက အရိပ်ရ၍အေးမြနေသည့်ပြင် လေကလည်း တဖြူးဖြူးတိုက်နေတော့ သာတောင့်သာယာရှိလှသည်။ ဘူးထဲမှ အအေးကုန်သွားတော့ ဘူးကိုဖျာပေါ်သို့ချလိုက်ပြီး မျိုးအောင်က စန်းမမကို လှမ်း၍ဖက်သည်။ “ နေပါဦး….” .“ ဟင်း…ဟင်း….မင်း စားချင်နေတာ တို့ သိတယ်နော်…” စန်းမမက ဗလုံးဗထွေးဖြင့် ကိတ်မုန့်စားရင်း ပြောသည်။ ပြောပုံလေးက မခို့တရို့လေးနှင့် ကြာမူဟန်ကပါနေတော့ မျိုးအောင်စိတ် တွေ ထောင်းကနဲထသွားကာ ဘေးတိုက်အနေအထားမှ စန်းမမကို ကြုံးဖက်လိုက်ပြီး စန်းမမ၏ ပါးနှစ်ဖက်ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် အတင်း နမ်းပစ်လိုက်သည်။ “ ဟေ့….
” စန်းမမက သူ့ကိုလှမ်းကြည့်ရင်း တခစ်ခစ်ရယ်သည်။ “ ချွတ်လေ…..နည်းတာကြီး မဟုတ်ဘူး….ဘာကြည့်နေတာလဲ….ဖြစ်နေလိုက်တာ….မှာ ” စန်းမမက မျိုးအောင်၏ပုဆိုးကို လှမ်း၍ဆွဲသည်။ ဆွဲတာက ပုဆိုးခါးပုံစကို ဆွဲတာမဟုတ်။ ပုဆိုးထဲမှ ငေါက်ထောင်နေသော နေရာ ကိုလှမ်းဆွဲပြီး အတင်းညှစ်ကာ ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်၍ မျိုးအောင်မှာ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ သူ့ပစ္စည်းကြီးနာသွားပြီး ကိုယ်ကိုနောက်သို့ ဆုတ် လိုက်မိသည်။ စန်းမမက ပစ္စည်းကြီးကို မလွှတ်။ အတင်းညှစ်၍ ကိုင်မြဲတိုင်း ကိုင်ထားသည်။ “ အမလေး…..ခစ်ခစ်….ပြစမ်း ” ပြောလည်းပြော စန်းမမက မျိုးအောင်၏ ပုဆိုးကိုဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ ထိုအခါ လီးဒစ်ပြဲကြီးက ထွက်ပေါ်၍လာသည်။ လီးထိပ်ကြီးကို သူမ၏လက်ဖဝါးလေးဖြင့် အုပ်ကာ ဖွဖွလေးပွတ်သပ်ကိုင်ကြည့်ရင်း စန်းမမ၏ မျက်လုံးလေးများ အရည်လဲ့၍လာသည်။ ပြီးလျှင် လီးကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး စန်းမမမှာ ဖျာပေါ်သို့ ပက်လက်လှန်ချလိုက်ပြီး သူမ၏စကပ်တိုလေးကို ခါးဆီသို့ လှန်တင်လိုက်သည်။ ဖောင်းထနေ သော စောက်ဖုတ်လေးပေါ်မှ အမွှေးမဲလေးတွေက ဘုတ်စုလေးဖြစ်နေသည်။ မျိုးအောင်က သူ့ပုဆိုးကို ကွင်းလုံးချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ဘေးမှနေ၍ စန်းမမ၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ ငုံ့လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် ဘရာစီယာအနက် လေးကို ချွတ်လိုက်ပြီး နို့နှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့ကာ လက်တစ်ဖက်ကလည်း စောက်ဖုတ်လေးကို ပွတ်ပွတ်ပေးသည်။ နို့သီးလေး တွေကို စုပ်ရင်းလျှာဖျားလေးဖြင့် ထိုးပတ်ယက်လိုက်သောဒဏ်က စန်းမမရင်ထဲထိ ကျင်ကျင်သွားအောင် ခံစားလိုက်ရသည်။ စန်းမမက .“ မမလည်း ချွတ်လေ ” “ အင်းပါ…” စန်းမမက ပြောလိုက်ပြီး ဖျာပေါ်မှ အအေးဘူးနှင့် ကိတ်မုန့်လက်ကျန်တို့ကို ယူ၍ ဘေးမှ ရွက်လှပင်လေးခြေရင်းသို့ ဖယ်ရွှေ့လိုက် သည်။ မျိုးအောင်က သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှ အင်္ကျ ကီိုချွတ်လိုက်ပြီး ဘေးသို့ချလိုက်သည်။ “ အဟင်း….ပြစမ်း….ဒါပါချွတ် ” “ အ…အ….အကုန်ချွတ်နော် ” စန်းမမက သူမ၏အပေါ်မှ အင်္ကျ ကီိုချွတ်ရင်း အဝတ်အစားကင်းကွာသွားပြီဖြစ်သည့် မျိုးအောင်၏ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို ရမက် မျက်လုံးတွေနှင့်ကြည့်ရင်းပြောသည်။ အမှန်တော့ မျိုးအောင်နှင့် စန်းမမတို့မှာ သမီးရည်းစားတွေဖြစ်သော်လည်း အိမ်ထောင်သည်တွေ တောင်မှ အိမ်ထောင်သက်တစ်နှစ်ကျော်မှပြောသော အပြောအဆိုမျိုးတွေကို သူတို့ပြောနေကြသည်။ စန်းမမက အပေါ်မှအင်္ကျီချွတ် လိုက်တော့ အတွင်းမှ ဘရာစီယာအနက်ရောင်လေးပေါ်ထွက်လာသည်။ အပျော့စားလေးဆိုတော့ နို့ဖြူဖြူလေးတွေက တလှုပ်လှုပ်ဖြစ် နေကြသည်။ ပြီးတော့ သူမက စကပ်အတွင်းမှ အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်လိုက်ပြန်သည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီအနက်လေးကို ဆွဲ၍အချွတ် စကပ်လေးကလန်သွားရာ လှစ်ကနဲပေါ်သွားသော ပေါင်ကြားမှ မဲမဲသဲသဲလေးတွေကို မြင်လိုက်ရပြီး မျိုးအောင် မျက်လုံးကြီးက ဝင်းကနဲလက်သွားသည်။ “ ဟေ့….ချွတ်….
အ…...အား…..အင်း…..အား….အမလေး…..အမလေး….အ….သူမ၏ကျောလေးကို ကော့၍ကော့၍ပေးနေမိသည်။ နို့နှစ်လုံးပြီးသွားပြန်တော့ စန်းမမ၏ ဝမ်းဗိုက်သားလေးတွေကို နှုတ်ခမ်းဖြင့်စုပ်လိုက် လျှာဖြင့်ယက်လိုက်ဖြင့် မျိုးအောင်၏ ဦးခေါင်းက စန်းမမ၏ အောက်ပိုင်းသို့ တဖြေးဖြေးရွေ့လျား၍ လာသည်။ စန်းမမ ဖိန်းဖိန်းရှိန်းရှိန်းခံစားရင်း ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်၍လာသည်။ သူမ၏ အကွဲကြောင်းလေးတွင်လည်း အရည်လေးတွေ စိမ့် ထွက်လာကြပြီဖြစ်သည်။ ဟော….ဟား ” စန်းမမ ကော့တက်သွားသည်။ မျိုးအောင်က စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးတွေကို တစ်ချက်ခြင်းယက်၍ပေးနေသည်။ “ နေ…..” စန်းမမ တကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်နေပြီး လက်ဖြင့် မျိုးအောင်၏ ခေါင်းကိုကိုင်ကာ သူမ၏ စောက်ပတ်ဆီသို့ .အား…..” စန်းမမ၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းက မျိုးအောင်၏ ခေါင်းကိုညှပ်၍ တင်သားကြီးများ တစ်မိုက်လောက် ကြွကာ ကော့တက်သွားသည်။ စိမ့် ထွက်လာသော စောက်ရည်တွေကလည်း ဖင်ကြားသို့တိုင်အောင် လိမ့်ဆင်းသွားသည်။ မျိုးအောင်က စောက်စေ့လေးကို လွှတ်ပေးလိုက် တော့မှ စန်းမမ၏ တင်သားကြီးများက ဘုန်းကနဲ ပြန်ကျသွားသည်။ စန်းမမ ရင်ဘတ်လေး နိမ့်ချီမြင့်ချီနှင့် မောနေသည်။ သူမ အမောပြေ ရန် သုံးမိနစ်မျှ မျိုးအောင်က အနားပေးလိုက်ပြီးမှ စန်းမမ၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကို လက်မနှစ်ဖက်ဖြင့်ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး သူ၏ ပါးစပ်ကို စောက်ပတ်ဝတွင်တေ့လိုက်ပြီး အထဲတွင် ပြည့်လျှံနေသော စောက်ရည်ကြည်များကို စုပ်ယူမျိုချပစ်လိုကသ်ည်။ ပြီးတော့မှ သူ၏ လျှာကို စုချွန်၍ စောက်ခေါင်းထဲထိုးသွင်းလိုက်ပြီး ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်ဖြင့် လုပ်ရာမှ အတွင်းသားလေးများကို လျှာဖျားလေးဖြင့် ထိုးထိုး ပြီးယက်သည်။ “ အား….အီး….ဟ…..” စန်းမမက ထိုသို့ပြောလိုက်ပြီး သူမ၏ လက်တစ်ဖက်က ဘေးမှ ရွက်လှပင်ခြေရင်းသို့ လှမ်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဖွင့်ထားသော ဘူးထဲမှ ကိတ်မုန့်တစ်တုံးကို လှမ်း၍နှိုက်လိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်က မျိုးအောင်၏ ခေါင်းကိုဆွဲဖယ်ကာ ကိတ်မုန့်တစ်တုံးလုံးကို သူမ၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုနှင့် စောက်ဖုတ်အုံလေးပေါ်ကိုပါ ချေမွဖိကပ်ပစ်လိုက်သည်။ စန်းမမ၏ စောက်ဖုတ်အုံတစ်ခုလုံး ကိတ်မုန့် များ ကရင်(မ်)များဖြင့် လိမ်းကျံလိုက်သလိုဖြစ်သွားသည်။ မျိုးအောင်က စန်းမမ၏ စောက်ပတ်အုံတစ်ခုလုံးပေါ်တွင်ရှိနေသော ကိတ်မုန့်ကရင်(မ်)များကို လျှာဖြင့် ကုန်စင်အောင်ယက်သည်။ ယက်နေစဉ်တွင် စန်းမမက သူမ၏စောက်ဖုတ်ကို ကော့ကော့ပေးသည်။ ငါးမိနစ်မျှအကြာ စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံးပေါ်ရှိ ကိတ်မုန့်များနှင့် ကရင်(မ်)များ ကုန်စင်သွားသောအခါတွင်တော့ စောစောကစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြား အကွဲကြောင်းထဲတွင် မြှုပ်နေသည့် စောက်စေ့လေးမှာ အပြင်သို့ထောင်တက် ထွက်ပြူလာသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ အားမလိုအားမရဟန်ဖြင့် မျိုးအောင်က စောက်စေ့လေးကို ငုံ့၍ နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုဖြင့် ညှပ်ကာ စုပ်လိုက်သည်။ “ အား….မျိုးအောင်၏ နှာခေါင်းကြီးက ဖောင်းဖောင်းမို့မို့စောက်ဖုတ်လေးကို ငုံ့၍နမ်းလိုက်ရင်း လျှာကြီးက အကွဲ ကြောင်းတလျှောက် ယက်တင်လိုက်သည်။ “ အမေ့….အီး….အ….အ…..နေဦး…...အား…...အင်း….
ဗြစ်…ပြွတ်….အား……အား…....အား….” မောသွားပြီလားဟုမေးသော စန်းမမ၏ အသံက မောသံပေါက်၍နေသည်။ စန်းမမ၏ လက်က မတ်တောင်၍နေသော မျိုးအောင်၏ လီးကြီးဆီသို့ လှမ်းလိုက်ပြီး ဆုပ်ကိုင်လကိုကာ လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ လီးကြီးထိပ်တွင် အရည်ကြည်လေးတွေက စို့၍နေသည်။ သူမ၏ လက်ကလေးဖြင့် လီးကြီးကို ဖွဖွလေးပွတ်ပွတ်ပေးသည်။ ပြီးမှ လက်ကိုလွှတ်၍ ပက်လက်လှန်၍နေသော မျိုးအောင်ပေါ်သို့ သူမကအ ပေါ်စီးမှယူကာ မျိုးအောင်၏နှုတ်ခမ်းတွေကို ဖိ၍စုပ်လိုက်သည်။ သူမအား မျိုးအောင်ကလည်း ပြန်၍စုပ်နမ်းရင်း သူမ၏နို့နှစ်လုံးကို ဆုပ် နယ်၍ ပေးသည်။ အတန်ကြာအောင် စုပ်နမ်းနေပြီးမှ စန်းမမက သူမ၏မျက်နှာကို ခွာလိုက်ပြီး ထထိုင်လိုက်သည်။ ပြီးမှ မျိုးအောင်၏ မျက်နှာဖက်ကို ကျောပေးပြီး စန်းမမက မျိုးအောင်၏ကိုယ်ပေါ်သို့ခွလိုက်ကာ လီးတန်ကြီးကို လက်တစ်ဖက်ကကိုင်ပြီး သူမ၏ကိုယ်ကို တ ဖြေးဖြေးဖိဖိချကာ လီးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ တစ်ရစ်ခြင်း သွင်းယူသည်။ ဖြူဖွေးလုံးတစ်တင်းကားနေသော စန်းမမဖင်ကြီးက တဖြေးဖြေးနိမ့်ဆင်းကာ လီးကို သွင်းယူနေပုံအား ကြည့်ရင်း မျိုးအောင်၏စိတ် တွေက ထသထက်ထလာသည်။ လီးတဆုံးဝင်ရန် လက်နှစ်လုံးလောက်အလိုတွင်တော့ မျိုးအောင်က စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သူမ၏ခါး ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ညှပ်၍ကိုင်လိုက်ပြီး သူ့ဖင်ကြီးကို ကြွကာ အောက်မှနေ၍ ပင့်ဆောင့်ပြီးသွင်းလိုက်သည်။ “ ပြွတ်….အ…..” စန်းမမ ခါးကြီးကော့တက်ကာ တဆတ်ဆတ်ဖြစ်လျက် ပြီးသွားပြီး သုတ်ရည်တွေက ပန်းထွက်လာသည်။ မျိုးအောင်က နိုင်အောင်မျို ချသည်။ လျှာကို စောက်ခေါင်းထဲတွင် လှည့်ပတ်လျက် မွှေပေးသည်။ စန်းမမ ကော့တက်နေသော ခါးကြီး ပြန်ကျသွားတော့မှ မျိုးအောင် က သူ့လျှာကို စောက်ခေါင်းထဲမှ ထုတ်ကာ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက် စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုနှင့် စောက်ပတ်အုံလေး တစ်ခုလုံးကို ခဏကြာအောင်ဖြေးဖြေးချင်းယက်ပေးပြီးမှ ထထိုင်လိုက်ပြီး စန်းမမ၏ ဘေးတွင်ဝင်၍လှဲကာ စန်းမမကိုဖက်၍ နမ်းလိုက်သည်။ “ မင်း မောသွားပြီလားဟင်….အမေ့…အင်း….ဗြစ်…ဗြစ်…..အမလေး….” .အီး….အ…..ဖိထားပြီး သူမ၏ စောက်ပတ် ကိုလည်း ကော့ကာ မျိုးအောင်၏ ပါးစပ်ဆီသို့ အတင်းပင့်ကပ်ပေးသည်။ စန်းမမတစ်ယောက် ကာမအရှိန် အလွန်အမင်းမြင့်လာပြီဆို သည်ကို သိလိုက်သော မျိုးအောင်က သူလ့ျှာကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ သွက်သွက်လက်လက်ကြီး ထုတ်ချီသွင်းချီလုပ်ပေးသည်။ ဒါကြောင့် စန်းမမမှာ မျိုးအောင်ကို စွဲနေတာဖြစ်သည်။ စန်းမမမှာ ဘဲတွေက ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် နှစ်နဲ့ချီပြီး စန်းမမမှာ မျိုးအောင်နှင့်တွဲရတာက မျိုးအောင် အမှုတ်ကောင်း၍ဖြစ်သည်။ အသစ်အဆန်းကို လိုချင်ကြတာချည်းဖြစ်သော်လည်း မျိုးအောင်ကို ဖြတ်၍နောက်တစ်ယောက်နှင့် တွဲလျှင် အဲဒီနောက်တစ်ယောက်က မှုတ်ပေးရင်တော်သေးသည်။ မမှုတ်လို့ ကျမကို မှုတ် ပေးပါလို့ ပြောလို့က မဖြစ်ပေ။ ဒါ့အပြင် မှုတ်ပေးသည်ပဲထားဦး။ မျိုးအောင်လောက် အမှုတ်ကျွမ်းကျင်ဖို့က မသေချာပေ။ ထို့ကြောင့် စန်းမမမှာ မျိုးအောင်ကို မပစ်နိုင်ဘဲ ဆက်ပြီးတွဲနေရတာဖြစ်သည်။ “ အ….အိုး…...” “ ဟင့်အင်း….
.ပြွတ်….စွပ်….ပြွတ်….” အမှန်တော့ စန်းမမက မျိုးအောင်ကို အပေါ်မှ တက်၍လိုးခိုင်း၍ရသည်။ သို့ရာတွင် မျိုးအောင်က သူမကို တစ်ချီပြီးအောင်မှုတ်ပေးပြီး သူကိုယ်တိုင်က မပြီးသေးသဖြင့် အပေါ်မှတက်ခိုင်းလျှင် မျိုးအောင်စောစောပြီးသွားနိုင်သည်။ ခုတော့ သူမက အပေါ်ကတက်လိုက်သည့် အတွက် လီးမှာ အပေါ်သို့မော့၍ထောင်နေသည့်အတွက် မျိုးအောင်မှာ သာမန်ထက်ပို၍ ကြာနေခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်ထင်တိုင်းအပေါ်မှ ဆောင့်ရင်း စန်းမမမှာ ပြီးချင်လာသည်။ ထို့ကြောင့် စန်းမမမှာ သူမ၏ဖင်ကြီးကို ကြွကြွပြီး အားရပါးရဆောင့်ဆောင့်လိုးတော့သည်။ “ ပြွတ်….ဗြစ်….ဗြစ်….စွပ်….” မျိုးအောင်ဖက်သို့ သမင်လည်ပြန်လှမ်းကြည့်၍ စန်းမမက အပြုံးမျက်နှာလေးနှင့် ပြောလိုက်သည်။ ထို့နောက် စန်းမမမှာ ဒူးထောက် ၍ ထိုင်ချလိက်ုပြီး သူမ၏ကိုယ်ကို ရှေ့သို့ငိုက်ကာ ဆင်းထားသော မျိုးအောင်၏ ခြေထောက်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် သူမ၏ လက်နှစ်ဖက်ကို ထောက်ကာ ဖင်ကြီးကို ကြွကြွပြီးလိုးသည်။ “ ပြွတ်….အမလေး….ဗြစ်…..ဗြစ်….အင်း….” မျိုးအောင်ကလည်း သူမ၏ခါးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ကာ လီးကြီးကို အောက်မှပင့်၍ ဖိကပ်ကာ သုတ်ရည်များပန်းထွက်သွားသလို စန်းမမ၏ခါးလေးမှာလည်း ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲဖြစ်၍သွားကာ ပြီးသွားလေတော့သည်။ ခဏနေတော့မှ စန်းမမမှာ မျိုးအောင်၏အပေါ်မှ ဆင်းလိုက်ပြီး မျိုးအောင်၏ဘေးသို့လှဲချလိုက်လေသည်။ မျိုးအောင်မှာ ဒီလောက်နှင့်တော့ အားမရသေးဘဲ နောက်ထပ်ဆက်၍လိုးဦးမည် ဆိုတာ စန်းမမက သိထားလေသည်။ မျိုးအောင်နှင့် စန်းမမတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ဖက်၍ အနားယူရင်း နောက်တစ်ချီအတွက် တာစူနေခိုက် မလှမ်းမ ကမ်းရှိ ခြုံပုတ်အကွယ်မှ လူသားနှစ်ယောက်ကတော့… .ဗြစ်….ပြွတ်….စွပ်….ကိုယ်ပြီးချင်လာပြီ…..ဖွတ်…ဖွတ်….ဗြစ်….ဖွတ်….” စန်းမမက သူ့ကိုကျောပေးပြီး ဖင်ကြီးကိုကြွပြီး ဆောင့်နေသဖြင့် မျိုးအောင်မှာ စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးကြီးအဝင်အထွက်ကို တွေ့မြင်၍နေလေသည်။ စန်းမမ၏ ဖင်ကြီးဖိချ၍ လိုးလိုက်တိုင်း မျိုးအောင်ကလည်း အောက်မှနေ၍ ပင့်ပင့်ဆောင့်ပြီးလိုးသည်။ ဖိအားနှင့် ပင့်အားတို့ အားနှစ်ခုပေါင်း၍ လိုးဆောင့်ချက်မှာ ပြင်းထန်သွားပြီး နှစ်ယောက်စလုံးမှာ အရသာပိုတွေ့ကာ အားရသွားကြသည်။ “ ပြွတ်….အင်း….ပလွတ်….စွပ်….ပြွတ်….“ အရမ်းကြီးပဲ….ဆောင့်….ပြွတ်….အား…. .ပလွတ်…. ဆောင့်….စွပ်….ပြွတ်….ဗြစ်…ဖွတ်….ပြွတ်….ပြွတ်…ပြွတ်….ပြွတ်….ဖွတ်….ပြွတ်….အိုး….မမ….ဗြစ်….ပြွတ်….” စန်းမမမှာ တစ်ချက်ခြင်းအရသာခံ၍ လိုးနေရာမှ အားမလိုအားမရဖြင့် ခပ်သွက်သွက်လေး ဆောင့်ဆောင့်လိုးလိုက်၊ တစ်ချက်ခြင်း ပြန်၍လိုးလိုက်နှင့် စိတ်ထဲရှိသလိုထင်တိုင်း လိုးနေသည်။ “ ပြွတ်….စွပ်…..အိုး….စွပ်….ဗြစ်….စွပ်….ဗြစ်….ပလွတ်….” စန်းမမမှာ အံကိုက်ဖြစ်သွားကာ မျိုးအောင်ကလည်း ပြီးချင်ပြီဖြစ်၍ အားတက်သွားပြီး အံကိုကြိတက်ာ ဆောင့်ပစ်လိုက်သည်။ “ စွပ်….ပြွတ်….
..အင့်….ပြွတ်….။ ခင်ခင်သူမှာလည်း စန်းမမတို့အတွဲ ကိုကြည့်ပြီး စိတ်တွေအတော်ထနေပုံရလေသည်။ ဒီတော့ စိုးလင်းအတွက် ခင်ခင်သူက အဆင်သင့်ဖြစ်နေချေပြီ။ အိမ်ပေါ်သို့ရောက် သည်နှင့် ခင်ခင်သူက ဦးဆောင်၍ အိမ်ခန်းလွတ်တစ်ခုထဲသို့ ဝင်သွားသည်။ စိုးလင်းကနောက်မှ လိုက်ဝင်သွားပြီး အထဲရောက်သည်နှင့် အိပ်ခန်းတံခါးကို ပိတ်လကိုသည်။ စိုးလင်းက သူဝတ်ထားသော ဘောင်းဘီကိုချွတ်ချလိုက်သည်။ ခင်ခင်သူက သူ့ကိုကျောပေးပြီး ကိုယ်ပေါ်က အင်္ကျီတွေကို ချွတ်နေ သည်။ သူမ၏ နောက်ကျောကိုကြည့်ရင်း စိုးလင်းက သူ၏ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်ရာ ခြောက်လက်မကျော်ကျော်လောက်ရှိ သော လီးတန်ကြီးက ငေါက်ကနဲထွက်၍လာသည်။ စိုးလင်း မနေနိုင်မထိုင်နိုင်နှင့် ခင်ခင်သ၏ူနောက်ကျောသို့ပြေးကပ်သွားပြီး သူမကို နောက်မှသိုင်းဖက်ကာ မချိမဆန့်ဖြစ်နေသော လီးတန်ကြီးကို ခင်ခင်သူ၏ တင်သားကြီးနှင့် ကပ်၍ဖိထားလိုက်သည်။ “ အကိုကလည်း နေဦးလေ…...” “ အကို မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ….ဖွတ်…..” အထဲတွင် အရည်တွေက အိုင်၍နေသည်။ လီးကို ဆောင့်သွင်းလိုက်၊ ပြန်ထုတ်လိုက် လုပ်လေတော့ အထဲမှ အရည်တွေက မြင်မ ကောင်းအောင် ထွက်ကျ၍လာသည်။ “ ပြွတ်…...ပလွတ်…..ပလွတ်….ဟား….“ ကဲ….” “ အကိုကလည်းကွာ….အကို…တော်လောက်ပြီနော်…စန်းမ သူ့ဘဲနဲ့နေတာကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ ခင်သူခေါ်လာပြီး သူတို့နှစ်ယောက်ကို ပေးတွေ့ပြီးပြီ …..ပလွတ်…...ပြွတ်….ပလွတ်….ဖွတ်….ဗြစ်…..ဒီမှာ အဝတ်တွေ ချွတ်ဦးမယ်….ပြွတ်….အင့်……အား…….ဗြစ်….ဗြစ်…..အ….အကိုလဲ ကြည့်လို့အားရသွားပြီ….ဗြစ်….ပြွတ်… …” “ အင့်….” စိုးလင်း၏ ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းထန်သလို ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ ပြန်ပြန်ဆောင့်ပေးနေသော ခင်ခင်သူကလည်း မာန်ပါလှလေ သည်။ ထို့ပြင် ခင်ခင်သူ၏ နို့နှစ်လုံးကို ဆွဲကိုင်၍ထားသော စိုးလင်း၏ .ပလွတ်….” စိုးလင်းက သူ့ကိုယ်ပေါ်မှ ရှုပ်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်သလို ခင်ခင်သူကလည်း သူမ၏ခါးမှ ထဘီကို ကွင်းလုံးချွတ်ချလိုက်သည်။ နှစ် ယောက်စလုံး ကိုယလ်ုံးတီးဖြစ်သွားကြပြီ။ ခင်ခင်သူက ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ဒူးထောက်လိုက်ပြီး လေးဖက်ထောက်ပေးလိုက်သည်။ တွဲ လောင်းဖြစ်သွားသော နို့အုံနှစ်လုံးကို နောက်မှနေ၍ လှမ်းကိုင်ရင်း သူ့လီးကို နောက်သို့ပြူးထွက်နေသော ခင်ခင်သူ၏ စောက်ဖုတ်ဝသို့ တေ့ကာ ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။ “ ပြွတ်….ပြွတ်….” စိုးလင်းက ခင်သူကို ခေါင်းငြိမ့်ပြပြီး နှစ်ယောက်သား အိမ်ပေါ်သို့ပြန်၍ တက်ခဲ့ကြလေသည်။ အမှန်တော့ စိုးလင်းမှာ စန်းမမတစ် ယောက်ခံတာကို ကြည့်ချင်နေခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ သူ့ချစ်သူ ခင်သူအားပြောပြီး ဒီနေရာကို အပါခေါ်ပြီး ချိန်းတွေ့စေခဲ့တာဖြစ်လေ သည်။ အခုတော့ စန်းမမတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေသည်ကို မျက်ဝါးထင်ထင်တဝကြီး ကြည့်ခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ သူ၏ ဘောင်းဘီထဲမှ ပစ္စည်းကြီးကလည်း မချိမဆန့်ဖြစ်နေချေပြီ။ ခင်ခင်သူကလည်း သူ့ကိုအိမ်ပေါ်သို့အပါခေါ်နေတော့… .ဖွတ်….ဖွတ်…....ပြွတ်….ပြွတ်….အ….ဗြစ်….အိမ်ပေါ်တက်ကြရအောင်…..
မြန်မြန်သာ လုပ်လိုက်တော့….ဖွတ်….” “ ဒါဖြင့် ဘယ်လလိုပ်မလဲဟင်…..စွပ်….. “ ရတယ်…..ပြွတ်….ပြွတ်….ဗြစ်….” လီးကျွတ်သွားလျှင် ခင်ခင်သူက မတ်တတ်ထရပ်လိုက်တော့ စိုးလင်းကပါ မတ်တတ်ထရပ်လိုက်သည်။ ခင်ခင်သူက မတ်တတ်ရပ် လျက်မှ ခါးကိုကုန်း၍ သူမ၏ခြေချင်းဝတ်နှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ အကြောလျှော့သော လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေ သည့်ပမာဖြစ်သည်။ ခါးက လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီး ကုန်းထားတော့ စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်း နောက်ကို လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီး ပြူးထွက်နေသည်။ စောစောက လိုးလက်စအရှိန်ဖြင့် အရည်တို့က စိုရွှဲကာ နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုမှာ အရည်တို့ကြောင့် ပြောင်လက်နေရုံမျှမ က အကွဲကြောင်းတွင်လည်း အရည်တို့က အကြောင်းလိုက်ဖြစ်နေသည်။ နောက်ကနေကြည့်ရသည်မှာ အလွန်ပင် ရမက်ထန်စရာ ကောင်းလှသည်မို့ စိုးလင်းမှာ မနေနိုင်တော့ဘဲ ခင်ခင်သူ၏ နောက်သို့တိုးကပ်ပြီး သူမ၏ခါးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အသေအချာကိုင်လိုက်သည်။ ဒီပုံစံမှာ နောက်ကလိုးတဲ့လူက ရှေ့ကခံတဲ့သူကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အသေအချာထိန်းပြီး ကိုင်ထားနိုင်မှ တော်ကာကျသည်။ ထိသုို့မှ မဟုတ်လျှင် ရှေ့မှလူမှာ တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်ရုံနှင့် ပစ်လဲသွားနိုင်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ စိုးလင်းက လီးကို ဆောင့်၍မသွင်း။ ဖြေးဖြေး ချင်းသွင်းသည်။ ပြီးတော့ တစ်ချက်ခြင်း ဆောင့် ဆောင့်လိုးသည်။ “ ပြွတ်…...ပြွတ်….ပြွတ်….ကိုယ်….ဗြစ်….ပြွတ်….လုပ်….ဗြစ်…..ပလွတ်….လက်ကလည်း ပညာသားပါလှသည်။ နို့သီးတွေကို လက်ညှိုးလက် မတို့ဖြင့် ညှပ်၍ ပွတ်ချေနေရင်းမှ လက်ဖဝါးထဲရောက်နေသော နို့အုံကိုလည်း ညှစ် ညှစ်ပေးသည်။ စောစောက စန်းမမတို့စုံတွဲကို ကြည့် ပြီး သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာလည်း ကာမစိတ်တွေပြင်းထန်နေခြင်းဖြစ်သည်။ “ ပြွတ်….စွပ်…..” “ အဟင်း….အားရပြီလား ” “ အင်း….လုပ်….” “ အင်း….အင်း…...ထိတယ်….ပြွတ်…ဗြစ်….” စိုးလင်းက အားရပါးရကြီးကို ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်သည်။ (၅)မိနစ်မျှအကြာတွင်တော့….ဖွတ်….လုပ်….ကိုယ်….အ… .” ခင်ခင်သူက စိုးလင်းကို သမင်လည်ပြန်လှမ်းကြည့်၍မေးသည်။ “ ကိုယ် မတ်တတ်ရပ်ပြီး ဆောင့်ချင်တယ် ” ခင်ခင်သူ တစ်ချက်တွေဝေ၍ စဉ်းစားလိုက်သည်။ ပြီးမှ…..အား….ဖွတ်….” “ ကိုယ် သိပ်ပြီးဆောင့်ရတာ အားမရချင်ဘူး…...” “ အင်း….ပြွတ်….စွပ်…ဖွတ်….ဟင်း….ဟား….ဖွတ်….အားရရဲ့လားဟင်….အ….ဖွတ်….အားရပြီ ခင်သူ….” “ ကိုယ်….ပလွတ်…...စွပ်….ပြွတ်….လုပ်…..ဗြစ်….ဗြစ်…..ကိုယ် သိပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်တာပဲ….ကိုယ့်ဟာကြီးကို ခဏချွတ်လိုက်….ဗြစ်…. “ ပြွတ်….ဗြစ်….ဗြစ်….” ခင်ခင်သူ၏ ဆန္ဒအရ စိုးလင်း၏ ဆောင့်ချက်တွေမှာ ပြင်းထန်သွက်လက်လာသည်။ “ ပြွတ်….
” .ဆွဲ….ဖွတ်….လုပ်…..ပြွတ်…..ကိုယ်တို့ ထပ်လုပ်ကြရအောင်လား ” “ ဟောတော့….တစ်ပြားသားမှ မလျော့သွားဘူး….” “ စိတ်ချ ခင်သူ ဆန္ဒပြည့်ရစေမယ် ” ပြောပြီးသည်နှင့် စိုးလင်းက လီးကိုစောက်ပတ်ဝသို့တေ့လိုက်ပြီး ခင်ခင်သူ၏ နို့အုံနှစ်လုံးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲ၍ လီးကို ဆောင့် သွင်းလိုက်သည်။ “ ပြွတ်….လုပ်….ကောင်းလိုက်တာ….လုပ်…..ဒီတစ်ခါတော့ ရိုးရိုးပဲလုပ်ကွာ….အဲဒါ ခံလို့ သိပ်ကောင်းတာပဲ….ခင်သူ….အ….ပြွတ်….အင်း….ဆောင့် ဟုတ်ပြီ…..ဒုတ်…..” ပြောလည်းပြော ခင်ခင်သူက လီးကိုလွှတ်၍ သေချာပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး ဒူးနှစ်လုံးထောင်ကာ ပေါင်ကားပေးလိုက်သည်။ လှေကြီး ထိုး ရိုးရိုးပဲပေါ့။ စိုးလင်းကလည်း ကောက်ကာငင်ကာထ၍ သူမ၏ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ဝင်၍ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်သည်။ “ ကိုယ်…..အ….ဗြစ်….အား….ဟုတ်ပြီ….ဟင့်….” ခင်ခင်သူ မျက်လုံးလေးတွေ ဝိုင်းသွားပြီး အံ့သြသွားသည်။ ဒါပေမယ့် ခင်ခင်သူ ကိုယ်တိုင်မှာလည်း စိုးလင်း၏ စံချိန်မှီလီးကြီးကို သူမ ၏ လက်ကလေးဖြင့် ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ရင်း သူမကိုယ်တိုင်မှာလည်း စိတ်တွေပြန်ပြီး ထလာနေပြီဖြစ်သည်။ “ ကိုယ့် သဘောပဲလေ….” ဘယ်ကျပါ့မလဲ စိုးလင်းစိတ်တွေက မတရားထန်နေသည်။ ငယ်ငယ်….” ခင်ခင်သူ တအားအားအော်ရင်း ဖင်ကြီးယမ်းခါပြီး ပြီးသွားကာ ရှေ့သို့လဲကျမလြို ဖစ်သွားတော့ရာ စိုးလင်းက သူမ၏ခါးကို အတင်းဆွဲ ထားပြီး အားရပါးရဆယ်ချက်မျှ ဆောင့်လိုက်ပြီး သုတ်ရည်များကို ပန်းထုတ်လိုက်ကာ တခဏအတွင်း နှစ်ယောက်သားမှာ ကြမ်းပြင်ပေါ် သို့ တဖြေးဖြေးဖင်ထိုင်လျက်သား ကျသွားကြသည်။ ဒီတော့မှ လီးကိုချွတ်၍ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် နှစ်ယောက်သား ပက်လက်လှန်ကာ အ မောဖြေနေကြသည်။ ခဏကြာတော့မှ ခင်ခင်သူက လက်တစ်ဖက်ဖြင့် စိုးလင်း၏လီးကြီးကို လှမ်းကိုင်လိုက်သည်။ “ ဟယ်….” “ ခင်သူ့ကို နို့တွေဆွဲဆွဲပြီး ဆောင့်ကွာ….ဆွဲ…..ဒီအတိုင်းကြီးပဲ….ချောချော….လှလှ မိန်းကလေးတွေ ကာမစပ်ယှက်ရင် ဘယ် လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတာ ယောက်ျားတိုင်း သိချင်ကြသည်။ တွေ့မြင်ချင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် စိုးလင်းက စန်းမမ အလိုးခံတာကိုကြည့်ချင်၍ ခင်ခင်သူကိုဖွင့်ပြောပြီး သူတို့အတွဲကို ဒီနေရာသို့ ခေါ်လာကာ ပေးတွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စိုးလင်း စန်းမမ ခံတာကိုကြည့်ပြီး စိတ်တွေအ ရမ်းထနေတာဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် စိုးလင်းက တက္ကစီသမား၊ လူကလည်း ရည်းစားနှင့် ဒီနေ့ချိန်းတွေ့မှာဖြစ်သည့်အတွက် သောက်ဆေးက လည်း သောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် စိုးလင်းလီးက မကျဘဲ နဂိုအတိုင်း တင်းခံနေတာဖြစ်သည်။ တစ်ချီပြီးထားတာမကြာသေးပေမယ့် လီးကလည်း မကျသေးသည့်အပြင် ခင်ခင်သူကလည်း လက်ဖြင့် လီးကိုကိုင်လိုက်တော့ စိုးလင်း၏ စိတ်တွေက ဟုန်းကနဲ ပြန်၍ထလာသည်။ “ ခင်သူ…...” “ ဘာလဲ….ဖွတ်….” “ အင်း…..
ပြွတ်…..” ထိုအချိန်တွင် ပြတင်းပေါက်မှ သူတို့ကိုချောင်းကြည့်နေသော စန်းမမနှင့် မျိုးအောင်တို့မှာ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက် ကြည့်လိုက်မိသည်။ ပြီးတော့ မျိုးအောင်က တိုးတိုးကပ်၍ပြောသည်။ “ တို့လည်း နောက်တစ်ချီထပ်လိုးရအောင် မမ ” “ အင်း….ဗြစ်….“ ပြွတ်….ဖွတ်….ပြွတ်….ဗြစ်…..ပြွတ်….လာသွားမယ် ” စန်းမမက မျိုးအောင်၏ လက်တစ်ဖက်ကဆွိုဲ၍ခေါ်ကာ သူတို့ခင်းထားသော ဖျာလေးရှိရာ မြေကွက်လပ်လေးသို့ ဦးတည်၍ အပြေးတပိုင်းနှင့် လာခဲ့ကြလေတော့သည်။ ပြီးပါပြီ။ ၀ါသနာရှင်များဖတ်မှတ်သိမ်းဆည်းရလွယ်ကူအောင် အချစ်တက္ကသိုလ်မှ ကူးယူပြီး PDF ဖိုင်ပြုလုပ်ပေးလိုက်သည်။ ဒေါက်တာချက်ကြီး(၁၇၊၂၊၂၀၁၃) .ပလွတ်….
Documents Similar To 125900362-á‚€á€€á€¶á‚€á€€á€¶á€–á€”á€¹á€–á€”á€¹-á€»á€™á€”á€¹á€»á€™á€”á€¹á€†á€”á€¹á€†á€”á€¹
More From mgmgpwar